वर्षाको ब्रेकअप ! ‘तिम्रो जिवन राम्रो होस्’ भन्दै प्रेमी सबिनले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस – Tufan Media News
वर्षाको ब्रेकअप ! ‘तिम्रो जिवन राम्रो होस्’ भन्दै प्रेमी सबिनले लेखे यस्तो भावुक स्टाटस
१८ माघ २०७७, आईतवार १३:३८
काठमाडौं । वर्षा सिवाकोटी आफ्नो ब्यक्तिगत जिवनलाई त्यती धेरै विवादित बनाउँदिनन् । तर कलाकारको ब्यक्तिगत जिवनमा सबैको चासो भने हुन्छ । त्यसैले करिब एक बर्ष अघि अभिनेत्री बर्षा सिवाकाटी आफ्नो प्रेमी सबिन थापालाई भेट्न अमेरिका गएको भन्दै समाचार प्रकाशित भए । सो समाचारलाई वर्षाले पनि कुनै प्रतिकृया दिइनन् ।
उनले प्रेमको बारेमा खुलेर बोल्दा पनि बोलिनन् । तर मिडियामा आएका कुरा इन्कार पनि गरिनन् । झण्डै एक बर्षपछि बर्षा पुनः सबिनलाई भेट्न अमेरिका पुगेकी थिइन । कोरोनाको जोखिमकै बीच उनी अमेरिका पुगेकी थिइन् ।
त्यती बेलाका उनीहरुका तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बने । लकडाउनको समयमा कोरोनाको पर्वाह नगरी अमेरिका पुगेकी बर्षाले सविनसंग समय विताएका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए । उनीहरुका यस्ता तस्बिर मिडियामा आएपछि उनीहरु चाडैँनै विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको आशंका पनि गरियो ।
तर विवाहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अचानक उनीहरुको सम्बन्ध सकिएको संकेत सहितको स्टाटस सविनले पोष्ट गरेका छन् । बर्षा नेपाल फर्किएसँगै उनीहरुको प्रेममा बाधा आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले भने बर्षाको ब्रेकअप भएको भन्दै फेरी सामाजिक संजाल भरि चर्चा चलेको छ । उनका प्रेमीले ब्रेकअप भएको कुरालाई लिएर भावुक हुदै इन्स्टाग्राममा स्टाटस समेत लेखे पछि त्यसलाई पुष्टि भएको मान्न सकिन्छ ।
उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध विछोड भएको भनी शनिबार बिहानै सबिनले आफ्नो र बर्षाको तस्बिर सहित लामो भावुक स्ट्याटस पोस्ट गरेका हुन्। सबिनले इन्टाग्राममा बर्षाले देखाएको इगो र व्यवहारका कारण सम्बन्ध सकिएको लेखेका छन् । उनले आगामी दिन वर्षाको जिवन लागि राम्रो होस् भनी शुभकामना पनि दिएका छन् ।